Koonto Furashada | FAQ | DIllaalka FX ee isku dhafka | gt.io | Africa
SU'AALAHA KOONTO FURASHADA
/ Koonto Furashada
1. Macluumaadkee shaqsiga ah ayaan u baahannahay inaan koonto ku furto?
1. Magaca buuxo
2. Ciwaanka i-meelka
4. Wadanka Daganaanshaha
2. Miyay jiraan wax xadeyno ah oo la marayo markii la furanayo koonto?
18 iyo wixii ka wayni waa da'da ugu yar ee looga baahanyahay diiwaangelinta koonto ee gt.io.
3. Illaa intee ayay qaadataa diiwaangelinta koonto?
Iska diiwaangelinta koonto waxay qaadataa wax ka yar hal daqiiqo. Markii aad iska diiwaangelisid, waxaan kuugu soo direynaa linkiga xaqiijinta ciwaanka i-meelkaaga. Riix linkiga si loo xaqiijiyo ciwaankaaga i-meelka, koontadaada ayaa kadib la diiwaangelinayaa.
4. suurtogal ma tahay in la furto wax ka badan hal koonto iyada oo la isticmaalayo isla ciwaanka i-meelka?
Maya, macmiil walba waxaa kaliya oo loo ogolyahay inuu furto hal koonto iyada oo la isticmaalayo isla ciwaanka i-meelka. Waad awoodaa, Si kastaba ha ahaatee ha ahaatee, inaad furato akoon ganacsi badan samaynaya.
5. Ka waran haddii aanan helin i-meelka diiwaangelinta ee ka imaanayo gt.io?
Haddii aadan heli linkiga diiwaangelinta, fadlan ka fiiri galka spam ee koontada i-meelkaaga marka koowaad. Haddii aadan weli heli karin, fadlan la soo kala xiriir kooxda Taageerada jaadka diyaarka ah ama i-meelka support@gt.io.
6. Haddii aan iska diiwaangeliyo koonto miyaan si toos ah u galaya barnaamijka ganacsiga?
Maya. Markii aad iska diiwaangelisid oo aad ansixisid ciwaanka i-meelkaaga waxaad geli kartaa aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha) iyo dhammaan lacagaha eWallet ee la heli karo, ee halka aad ku furi kartid koontada ganacsiga.
7. Maxay yihiin eWallets?
eWallets waxay u sameysantaa si toos ah oo waxaa loo isticmaali karaa in lacag la dhigto, lagala baxo iyo Wareejinada Gudaha ee ku socdo ama ka imaanayo koontooyinka ganacsiga oo lacago kala duwan ah.
8. Sidee ayaan u furi karaa Koontada Ganacsiga Tooska ah?
Waxaad ku furan kartaa koontada/koontooyinka ganacsiga adiga oo riixayo badhanka 'Koontooyinka Ganacsiga' ee gudaha aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha), adiga oo dooranayo Koontada Tooska ah, oo xiggo tallaabooyinka la tilmaamay.
9. Ma furan kartaa koontada bilaa dulsaarka ah (Muslimka)?
Haa waad awoodaa. Waa inaad marka koowaad furataa koontada ganacsiga caadiga ah intaa kadibna codsi u dirsato support@gt.io ama ka furato tikidh dhinaca aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha) si aad u codsatid koontada ganacsiga aan qidmada laheyn.
Waa in la ogaadaa in koontooyinka bilaa dulsaarka ay tahay in marwalba lagu codsado sababo la xiriira caqiido diimeed. Joogaga Aan caadiga aheyn iyo Sarifka lacagaha dhijitaalka waxaa laga reebay kuma jiraan akoonada bilaa dulsaarka ah oo waxaa lagu shubayaa/laga jarayaa sida ka qeyb ah qiimooyinka danaha caadiga ah.
10. Waa maxay lacagaha eWallet ee la heli akro?
11. Miyay jiraan wax xaddidaad wadaneed ah?
12. Miyay jiraan wax xadeyno ah oo khuseeya tirada koontooyinka ganacsiga ee aan furi karo?
Haa. Waxaad ku furan ilaa 5 akoon isla hal lacag ama isku darka dhowr lacagood.
13. Sidee ayaan u kansalgareeyaa koontadeyda?
Waxaad ku kansalgareyn kartaa koontadaada adiga oo ku soo dirayo i-meel support@gt.io. Fadlan hubi in codsiga laga soo diro isku i-meelka aad isticmaashid markii aad iska diiwaangelisid, iyo inaad si cad u tilmaantay inaad rabtid inaad joojisid koontadaada.
14. Ma suurtogal baa inaad furtid akoon ganacsi macmal ah?
Waxaan bixinaa diiwaanka koontooyinka iyo haraaga onleenka oo toos ahaan loogu shubo koontadaada. Waxaad furi kartaa kaliya hal koonto ganacsiga macmal ah lacagtiiba, oo waxaad dooran kartaa raasumaalka amaahda ee ka bilow 1:5 illaa 1:500 adiga oo riixayo 'Trading Accounts' oo gudaha aagaaga illaalsan badhanka (Bogga Macaamiisha) iyo adiga oo xulanayo dooqa diiwaanka.
15. Miyaan furan karaa koonto shirkadeed?
Haa. Markii aad furaneysid koonto shirkadeed, geli magaca shirkadaada gudaha "Magaca Koowaad" iyo nooca shirkadaada (tusaale ahaan, limited company, Ltd.) ee "Magaca Dambe".
16. Maxaan sameeyaa haddii aan illoobo baaswuudhka gelitaanka Koontadeyda?
Haddii aad ilowdid baaswuudhkaaga, waxaad riixi kartaa dooqa 'Forgot your password?' oo shaashada gelitaanka oo ka sameyso baaswuudh cusub shaashada soo celinta baaswuudhka sida ka qeyb ah tilmaamaha la tilmaamay.
17. Sidee ayaan u sameystaa xaqiijinta 2-da tallaabo (2FA) ah ee akoonka?
Aad Setingiska geeska midigta kore ee aagaaga ku lifaaqan (Bogga Macaamiisha). Ka bilow halkaas, waad xulan kartaa Illaalada, kaas oo kuu ogolaanayo inaad ku sameysato 2FA ee akoonkaaga oo gelitaanada iyo kala bixintaanadao gooni ah.
18. Sidee ayaan u damiyaa xaqiijinta 2-da tallaabo (2FA) ee akoonkaaga?
Aad Setingiska ee geeska midigta kore ee aagaaga ku lifaaqan (Bogga Macaamiisha). Ka bilow halkaan, waad xulan kartaa Illaalada, kaas oo kuu ogolaanayo inaad ka saartid 2FA xiliga gelitaanka. Waad ka saari kartaa xaqiijiyaha Google oo kala bixintaanka, laakin foomka qaar ee hubinta xaqiijinta waa inay ku hartaa. Xaaladaan, waxaa lagaaga baahanayaa inaad ka tagtid i-meelkaaga ugu yaraan, maadaama amni daraadeed ay tahay inuu jiro ugu yaraan hal qaab oo lagu xaqiijinayo ogolaanshaha lacag la bixistaada.